R2P ဘယ် အ ခါ မှာ သုံး နိုင် သ လဲ ? – GaMone Media
Homepage / Knowledge / R2P ဘယ် အ ခါ မှာ သုံး နိုင် သ လဲ ?
R2P ဘယ် အ ခါ မှာ သုံး နိုင် သ လဲ ?
R2P အကြောင်းရေး ချင်တာကြာပါပြီ။
ကိုယ်သဘောပေါက်တာနဲ့ လက်တွေ့နဲ့ မလွဲစေချင်လို့ သိတဲ့ သူကိုမေး ဖို့စောင့်နေတာပါ။
အဓိကပြောဖြစ်ခဲ့တာက မြန်မာပြည်က လုံထိန်းတပ်တွေရဲ့ လူမဆန်အောင်ရက်စက် အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ R2P အကြောင်းပါ။
👉 R2P မြန်မာပြည် အတွက်သုံးနိုင်ဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်တာတွေကိုသိမြင်ပြီး ပြည်သူလူထုကဘာလုပ်ပေးရမလဲသိအောင် ဒီ post ကိုရေးပါတယ်။
အရင်ဆုံး R2P သုံးဖို့ဘာလို့အဆင့်ဆင့်လုပ်နေရတာလဲဆိုတာရှင်းပြပါမယ်။ R2P ဟာသမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ်။ ၁၉၉၀ ကျော်ကာလကအဖြစ်အပျက်တွေကို အခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် ၁၉၈၈ တုန်းက R2P အကြောင်းမပြောခဲ့ကြတာပါ။ အခုခေတ်မှာ ၁၉၈၈ တုန်းကနဲ့မတူပဲ R2P အသံကကျယ်လောင်လာပါပြီ။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြည်ပအရေးအခင်းအတွက်လွှတ်မယ်ဆိုရင် အလွန်ကိုစဉ်းစားရပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့လိုလို့အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
ကျနော်တို့မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံတကာအရေးအခင်းတွေမှာ R2P အကြောင်းဝင်မပြောခဲ့ကြပါ။ တချို့ဆိုသိတောင်မသိခဲ့ပါ။
ရဝမ်ဒါကိစ္စကစလို့ ယီမင်အရေးအခင်းအထိကျနော်တို့ သေသေချာချာမသိခဲ့ကြပါ။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတောင် ကျနော်တို့ကICJ မှာကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။
R2P ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ R2P (Responsible to Protect ) ဟာ “ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိခြင်း” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ R2P မှာ Pillars (၃) ချက်ရှိပါတယ်။ ပုံကိုကြည့်ပါ။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ မိမိနိုင်ငံသားများကို (လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူမဆန်သောပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း၊ မျိုးပြုတ်အောင်ရှင်းခြင်းတို့ရန်မှ) ကာကွယ်ပေးရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို သူ့နိုင်ငံသားများအား အထက်ပါရန် မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးဖို့တာဝန်ရှိသည်။
အကယ်၍နိုင်ငံတနိုင်ငံက မိမိနိုင်ငံသားများကို အထက်ပါရန်များမှ ကာကွယ်ပေးလိုသောဆန္ဒမရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုမရှိခဲ့ရင် … အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည် (သံတမန်ရေးနည်းလမ်း၊ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနည်း၊ နှင့် အခြားသောငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်) အချိန်မီ ပြတ်သားသောအရေးယူမှုကို လုပ်ဆောင်ရမည်။
အကယ်၍ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် မလုံလောက်ပါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည် (UN Charter နှင့်အညီ) အင်အားကိုအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ပိုမိုပြင်းထန်သောအရေးယူမှုများကို လုပ်ဆောင်ရမည်။
(ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတကာကလည်း ဝင်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုရင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုလွှတ်တာ နောက်ဆုံးအဆင့်ထားပြီး အခြားနည်းနဲ့အရင်ဖြေရှင်းရမယ်)
အဲ့ဒီ Pillars (၃) ချက်အတိုင်းအစဉ်အလိုက်သွားပါတယ်။
သေသေချာချာဖတ်ရင် အရင်ဆုံးကိုယ့်နိုင်ငံကကိုယ့်ပြည်သူကိုတာဝန် အရင်ယူရတယ်။ အဲ့ဒီမှာ နိုင်ငံဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုချက်၊ ပြည်သူဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုချက်တွေထည့် စဉ်းစားရပါမယ်။ ဒါတွေကို နောက်မှာပြောပါမယ်။ အရင်ဆုံး UN ကုလသမဂ္ဂလို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို မြန်မာပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရာအတွက်ခေါ်မယ်ဆိုရင် ခေါ်ဖို့အကြောင်းခိုင်လုံရမယ်၊ ပြီးတော့ ခေါ်တဲ့လူရှိရပါမယ်။
လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ လူမဆန်သောပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ခြင်းတွေမှာ လာကိုက်ညီနေတယ်။ အရင်တုန်းက လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မျိုးပြုတ်အောင်ရှင်းခြင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာကစွပ်စွဲထားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ခေါ်ဖို့အကြောင်းကရပြီဆိုပါစို့။ ခေါ်ဖို့ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းလိုတယ်။
အဲဒီခေါ်တဲ့သူကို ပြည်သူတွေကခေါ်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းပေးရပါမယ်။ ပုံမှန်ကအစိုးရတစ်ရပ်ဟာ တစ်ခုခုကြောင့်သူ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာကို အကူအညီတောင်းတာပါပဲ။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၊လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ 🇺🇳ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိုစေလွှတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ (the State) နိုင်ငံဆိုတာကို အစိုးရနဲ့ကိုယ်စားပြုစဉ်းစားပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင် … အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ ဘယ်နိုင်ငံကမှအသိအမှတ်မပြုထားလို့ တရားဝင် အစိုးရမမြောက်သေးပါ။ သူကိုယ်တိုင်က ပြည်သူတွေအပေါ် လူမဆန်အောင်ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်နေလို့ ပြည်သူတွေက သူ့ရန်ကကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ R2P နဲ့ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု CRPH ကို နိုင်ငံတကာမှာ တရားဝင်အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းတွန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူကလက်ခံပေမယ့် နိုင်ငံတကာကလက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ 👉 ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်သူက နိုင်ငံတကာကအကူအညီကိုတောင်းခံမှာကိုး။
ပြည်သူလူထုက CRPH ကို တရားဝင်အောင်ဘယ်လိုဝန်းရံရမလဲဆိုရင် … CRPH ရဲ့ဦးဆောင်မှု နောက်ကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ စစ်ကောင်စီကို တရားမဝင်အောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးရပါမယ်။
စစ်ကောင်စီကိုတရားမဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ❓ CDM လို့ခေါ်တဲ့ အကြမ်းမဖက်ပဲစစ်ကောင်စီယန္တရားနဲ့ မပူးပေါင်းခြင်း၊ စစ်ကောင်စီကိုအလိုမရှိကြောင်း၊ CRPH ကိုသာထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြခြင်း၊ စတာတွေနဲ့ စစ်ကောင်စီကိုတရားမဝင်အောင် ဝိုင်းလုပ်ပေးရပါတယ်။
CRPH ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိတို့ရဲ့အခြေခိုင်မာလာဖို့ အားစိုက်ကြိုးစားပေးရပါမယ်။ CRPH နဲ့ပြည်သူလူထုကအတူတူတွဲနေတယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ကိုမင်းကိုနိုင်က CRPH ကိုထောက်ခံဝိုင်းရံကြဖို့ ပြည်သူလူထုကိုပန်ကြားနေတာပါ။ ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့နေရာမှာ တောင်ပေါ်မြေပြန့် ပြည်သူအားလုံးအကုန်ပါပါတယ်။
ဒါကြောင့် CRPH က အခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါ ထောက်ခံဖို့စည်းရုံးရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်း စစ်ကောင်စီသာအာဏာရသွားရင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပိုဝေးသွားမှာမို့ အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေမှာ CRPH ကိုထောက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက CRPH ဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ပိုချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖို့လည်း CRPH က နေ့မအားညမအားလုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ CRPH ဟာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနီးပါးအသက်ဝင်လာလေ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ အသက်ငင်လာလေပါပဲ။ နောက်တစ်ခုသိထားဖို့က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာကန့်ကွက်သူတွေရှိလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ❓ ယူဂိုစလားဗီးယားပြဿနာမှာ ရုရှားဟာဆဗ့်လူမျိုးတွေနဲ့ညီအကိုရင်းလိုနေပြီး ရပ်တည်ပေးခဲ့တာကို ကုလသမဂ္ဂက မရရအောင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းကရုရှားကြောင့် အချိန်တွေကြာခဲ့ရပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် …
▪️CRPH ဟာအစိုးရတစ်ရပ်အဖြစ်အသက်ဝင်လာဖို့ ပြည်သူလူထုကအစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးကူညီရပါမယ်။
▪️မြန်မာ့အရေးအခင်းမှာ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာ အလုပ်မဖြစ်လောက်ဘူးလို့ ရီပို့တာတွေက နမိတ်ပြနေပြီးဖြစ်တယ်။
▪️အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ CRPH က ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ R2P ခေါ်ရမှာ။
Dr Sasa လုပ်နေပြီ။ သူတရားဝင်ဖို့ ဦးကျော်မိုးထွန်းတရားဝင်ဖို့လိုတယ်။
Previous post ဒေါက်တာ ဆာဆာ မှ ယ နေ့ UN ကို တရား ဝင် တောင်း ဆို လိုက် တဲ့ အချက် (၄) ချက်
Next post ကမ္ဘာ အနှံ့ က အစိုးရ ခေါင်း ဆောင် များ ထံ ပိုင်တံခွန် ရေး တဲ့ အိတ်ဖွင့် ပေးစာ